Dadweynaha oo soo dhoweeyey ururada
15 Nov 15, 2012 - 6:34:33 AM
Kadib markii maalinimadii shalay madaxweynaha Puntland magaalada Garowe kaga dhawaaqey urur siyaasadeedkii ugu horeeyey waxa isi soo tarayey taageerada dadweynaha qaybahooda kala duwan u muujinayaan hirgelinta iyo furashada axsaabta siyaasada Puntland.
Barnaamijka Aragtida Dadweynaha ee Idaacadda Radio Garowe ayaa maanta 15 November,2012 waxa lagu soo qaatey Aragtida dadka ee ku aadan furashada ururada iyo axsaabta Siyaasada.
Barnaamijkan oo Khadka taleefan looga qayb qaadanayey ayaa dadweynuhu soo dhoweeyeen ururada furashooda iyagoona tilmamay in Puntland waa cusub u baryey.
Dhalinayradii ka qaybgashey ayaa dhankooda sheegey in haatan fursad u helayaan ka qaybgalka siyaasada islamarkaasina ku booriyey in dhamaan laga qayb qaato hanaanka siyaasadeed ee cusub.
Tan iyo markii la asaasey Puntland 1998 xukuumadda talada haysa haatan waxay dadaal xoogan ugu jirtaa inay kaga dhabeyso balanqaadkeedi 2009 oo ahaa in nidaamka axsaabta looga gudbey kii hore ee ahaa wax ku qaybsiga Qabiilka.